“Niampanga tena!” -
20/11/2018 admintriatra Tresaka 0
Naely fatratra tamin’ny tambazotra fa “hanao fanambarana goavana i Andry Rajoelina”. Aleo aloha tsy hihomehy lehiretsy raha ireny no antsoin’izy mianakavy hoe “fanambarana goavana”. Tahaka ireny zazakely mbola tsy mikatona loha-malemy be koretaka ireny, hany ka “niampanga tena” tsy fidiny nanamarina fa tena nampiasa vola be tokoa nandritra ny fifidianana.
Nividianan’i Andry Rajoelina finday, ahafahana maka sary ny voka-pifidianana daholo araka ny nambaran’ny biraom-pifidianana tsirairay. Mba ataovy hoe ny kajikajy tsotsotra, raha miisa 24 582 ny biraom-pifidianana, ary manodidina ny 500 000 fmg ny iray amin’ny finday misy fakan-tsary! Efa mihoatra ny 12 miliara ny vidin’izany, izany hoe, tena vola be tokoa no natonton-dRajoelina sy Ravatomanga tamin’iny fihodinana voalohany iny, ka tsy laitran’izy ireo mihitsy ny fisian’ny fihodinana faharoa.
“Niampanga tena” ihany ry Rajoelina sy ny forongony! Finday fotsiny izany dia efa nandanian’izy ireo 12 miliara mahery, ankoatra ny “tee-shirt” sy ny artista, niampy ny fanofana ireny helikôptera enina, ny afisy ary ny fividianana ny vatom-bahoaka navoakan’ny Vondrona Eoropeana.
Saingy izao no adinon-dRavatomanga sy Rajoelina: tsy voavidim-bola ny olom-pirenena tompon’andraikitra! Fantatry ny vahoaka malagasy ny fiavian’ireny vola be niraradraraka nandritra ny propagandy ireny, fantatry ny Malagasy, fa ny famerenana ireny vola be lany nandritra ny fampielezan-kevitra ireny no laharam-pahamehana ho an-dRajoelina sy Ravatomanga, raha toa ka tafaverina eo amin’ny fitondrana.
Malaina ny hamoaka vola be mihitsy mantsy ankehitriny i Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina, satria tahaka ny rano natondraka an-damosin-gisa izany. Niezaka nanafina ny marina izy ireo, kanefa dia izao “niampanga tena” izao ihany, niteny tsy nanontaniana fa tena nampiasa vola be tokoa nandritra iny fihodinana voalohany iny. Niampy finday miisa 24 582 izany mandehandeha manerana an’i Madagasikara. Mba mandoa hetra ara-dalàna ve aloha ny orinasa nividianana izany finday an’alina izany e?